ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: Halloween Day အမှတ်တရ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 6:13 AM
ဖတ်လို. ကောင်းလိုက်တာ မလှိုင်ရာ။ လူတင်မဟုတ်ဘူး သရဲတောင်မလှိုင်ကို ချစ်တာ။ ဆေးရုံခဏခဏတက်ရတယ်နော်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဦး။
အစ်မက အတော်အရေးအသားကောင်းတာပဲ။ :)..
လှိုင်ရေ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းသလို ရီစရာ သနားစရာတွေပါ ခံစားရတယ်။ လှိုင့်ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ လှိုင့်ရဲ့ မေတာစေတနာ ကိုလူတင် မဟုတ် တခြားဘ၀က ပါလိုချင်ကြတာ ကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ မကောင်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လိပ်ပြာငယ် ရင် အရိပ်အယောင်ပြလို့ မရဘူး လို့ ကြားဘူးတယ်။ ဒါ့မှမဟုတ် သူတို့ အတွက် အမျှကုသိုလ် ပေးနိုင်မဲ့သူ မိုလို့ထင်ပါတယ်။ အရိပ်ယောင်ပြ နိုင်တာ အသံပေး လှုပ်ရှားမှု့လုပ်နိုင်တာ အတော်အစွမ်းထက်နေပြီ။ အနွရယ် ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်း အဆင့်ထိ ရှိနေပြီ။ လှိုင့် တော်တော် ကံကောင်း သလို သတိလဲ ကောင်း ခဲ့တာဘဲ၊ ဒို့ သာဆိုရင် မတွေးရဲ ပါဘူး။
လှိုင်ရေ ဒုတိယတခေါက်ထပ်ဖတ် တော့မှ တကယ် ကြောက်စရာပါလား။ တကယ့် စိတ်မခိုင်သူ ဆိုရင် သူတို့ ဘော်ဒါ ဖြစ်သွားနိုင်လောက်တယ် ။ လှိုင့်ကို ချီးကျူးတယ်။ သူတို့ က သာဓုခေါ်နိုင်သလား။ သူတို့ဝမ်းသာ တယ်ဆိုပေမဲ့ လှိုင့်ကို မတွယ်တာဖို့ ပြောထားနော်။ သူတို့အတွက် နောက်ဘ၀ မြန်မြန်သွားတာ သူတို့ကောင်းသလို လှိုင့်အတွက်လည်း ကောင်းတာပေါ့။ ရေးနေရင်း ပလပ်စတစ်ခွက် က ဖုတ်ကနဲ ပြုတ်ကျလာတယ်။ လှမ်းကြည့်ပြီး ဒို့ ရဲ့ သရဲ ဂါထာရွတ်ရသေးတယ်။ ဒို့ က ကံကောင်းတာပေါ့နော်။ လှိုင့်လိုသာ ဆိုရင် မတွေးဝံ့ပါဘူး။ အတော်အဆင့်မြင့်နေသလို အနွရယ် ပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေတယ်။ တခြားသူဆိုရင် အဖော်လိုတယ် ဆိုပြီးဆွဲသွားနိုင်လောက်တယ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လှိုင်ကျန်းမာပါစေ. အနွရယ် ကင်းပါစေ. သူတို့လည်း ကျွတ်ပါစေ. ဒို့ရသမျှ သီလကိုလည်း အခု အမျှဝေပေးပါတယ်. အမျှ. အမျှ. အမျှ.